Ikhabhinethi eCoy Riverside kufutshane neZiko leDolophu yaseCorowa
Inqugwala sinombuki zindwendwe onguLisa And Ken
Ikhabhinethi yethu yindawo entle yokubaleka kuyo yonke into kwaye uphumle ngasemlanjeni. Indawo yothando kunye nemfihlo kuphela imizuzu emi-5 ukusuka kumbindi wedolophu!
Ungaloba kwidekhi yomlambo, ukonwabele ukukhwela ibhayisekile ecaleni kwendlela kaloliwe okanye undwendwele ii-wineries zaseRutherglen.
Ikhabhinethi ye-Romantic rustic elunxwemeni loMlambo i-Murray kumbindi we-Corowa. Ukuzola ngemibono emihle yomlambo, kwiigadi zabucala kunye negadi yediliya kunye neJetty. UKen noLisa baya kukwenza wamkeleke kakhulu!
Le yindawo yokuza kuyonwabela uxolo noxolo ngaphandle kokungxama, akukho nto ingcono yokwenza apha kunokuphumla kwaye ubukele umlambo udlula!
Ikhabhinethi izimele ngokupheleleyo enebhedi enye etofotofo kaKumkanikazi kunye nebhedi enye kunye nebhedi eqengqelekayo.
Kukho ikhitshi eyahlukileyo kunye negumbi lokuhlambela kwaye indawo yokuhlala kunye negumbi lokulala zizitayile ze studio.
Kukho isifudumezi seplanga esithandekayo esibaselweyo kunye neenkuni ezibonelelwa ebusika ukuze uhlale upholile.
Kukho iveranda engaphandle enetafile kunye nezitulo apho ungahlala khona kwaye ubukele umlambo udlula kwaye uhle uye kumgangatho wabucala ophezu kwamanzi. Indawo entle yokuloba.
Ikhabhathi esecaleni komlambo ikwipropathi yeehektare ezili-10 phakathi kokuhamba okanye umgama webhayisekile ukuya kumbindi wedolophu (malunga ne-2km). Kukho umkhondo webhayisekile okuthatha yonke indlela ukuya edolophini okanye umgama omde ukuya kumzi-mveliso wetshokholethi. Zininzi iindawo zewayini kwisiqingatha seyure yomjikelo okanye ungatsiba kumzila kaloliwe oya eRutherglen. Le ndawo ilungile kwi-wineries kunye nokutya.
Qaphela le ndlu inikwe amandla elanga kunye nejenereyitha yokuxhasa ukuba ii-240 zezixhobo ziyafuneka. Zonke izibane ziyi-12Volt ekwaqhuba iTV, unomathotholo/i-aux yomculo wakho isilingi fan kunye ne-12 Volt hairdryer. Ungayitshaja ifowuni yakho ephathwayo, nceda uze nentambo yakho ye-USB.
Kukho indlu yangasese eyenza umgquba esebenza kakuhle, kwaye ikhululekile kakhulu kunye nokuba inobuhlobo nokusingqongileyo.
Kwiinyanga ezishushu kuya kubonelelwa nge-air conditioner ephathekayo.
4.81 · Izimvo eziyi-136
I-Corowa imi kuMlambo i-Murray kwaye ikhabhathi ilungile kwibhanki yayo kwindawo efihlakeleyo kodwa iikhilomitha ezi-2 kuphela ukusuka kumbindi wedolophu.
Kukho iindlela ezinkulu zebhayisekile kwiindawo. Iivenkile zokutyela ezilungileyo kunye neendawo zewayini ezikufuphi. Kukwakho nefektri yetshokolethi eyonwabisayo ukuyindwendwela.
Umbuki zindwendwe ngu- Lisa And Ken
Sizodibana kwaye sibulise xa sifika. Ukuba sikude siya kulungiselela ilungu losapho ukuba likwamkele. Asisayi kuphinda sikuphazamise ngaphandle kokuba ucela kwaye uyafumaneka ukuze sikubonelele ngalo naluphi na ulwazi olufunayo ngokuhlala kwakho ngefowuni okanye ngetekisi.
Sizodibana kwaye sibulise xa sifika. Ukuba sikude siya kulungiselela ilungu losapho ukuba likwamkele. Asisayi kuphinda sikuphazamise ngaphandle kokuba ucela kwaye uyafumaneka ukuze…
ULisa And Ken yi-Superhost